EPL: Man United oo guul ka soo gaartay West Ham United oo laga qaatay kaarka cas, xilli Mata iyo Ibrahimovic ay shabaqa soo taabteen… + SAWIRRO – Gool FM
(London) 20 Janaayo 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa gaartay guusheedii lixaad oo xiriir ah horyaalka Premier League, kaddib markii ay 2-0 uga soo adkaadeen West Ham United oo ay booqdeen lagana qaatay kaarka cas.
West Ham United iyo Manchester United ayaa barbaro goolal la’aan 0-0 ku kala maray qeybtii hore ee ciyaarta, inkastoo West Ham kaarka guduudan laga qaatay15’daqiiqo qeybtii hore Sofiane Feghouli, kaddib markii uu qalad ku galay Phil Jones.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Man United ayaa goolka hore la timid waxaana goolkaas ka shaqeeyey 63’daqiiqo Marcus Rashford iyo Juan Mata oo bedel ku soo galay, Rashford ayaa dhigay halka uu Mata si qurux badan u dhammaystiray Man United ayaana hoggaanka ciyaarta ku qabatay 1-0.
Markale Man United ayaa shabaqa soo taabatay waxaana 78’daqiiqo laad xooggan u dhaliyey Zlatan Ibrahimovic kaddib caawin uu ka helay Herrera, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-0 ay ku adkaatay Man United.
Kooxda Man United oo gaartay kulankan guusheedii lixaad oo xiriir ah horyaalka Premier League ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta 6-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo leh 39-dhibcood 20 kulan oo ay dheeshay.
Real Madrid oo dooneysa Dele Alli